Alshabaab oo la wareegtay diyaarad Drone ah oo ku soo dhacday Buurhakaba - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Alshabaab oo la wareegtay diyaarad Drone ah oo ku soo dhacday Buurhakaba - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Kooxda Alshabaab ayaa la sheegay inay la wareegtay haraagii diyaarad nooca keligood is wada ah ee loo yaqaan (Drone) oo lagu wado inay Mareykanka leeyihiin oo maanta ku soo dhacday degaan ka tirsan degmada Buurkahaba ee Gobolka Bay.
Dadka degaayaa sheegay in diyaarada markii ay soo dhacdayba ay goobta tageen maleeshiyo ka trisan Alshabaab oo ay qaateen qalabkii diyaaradda soo dhacday, kadibna ay meesha isaga tageen. Ma jiro war ka soo baxay wasaaradda difaaadda Mareykanka oo xaqiijinaya ama ka hadlaya diyaaradda aan duuliyaha wadin ee ku dhacday Koonfurta Soomaaliya, laakiin waxay diyaaradahaasi duqeyn ka geysteen xarumaha Alshabaab ee K/Soomaaliya iyagoo hore u dilay saraakiisha ugu sareysay ee ururkaasi.
Diyaaradaha loo yaqaan Drone-ka ee is wada ayaa marar dhowr ah ku soo dhaca Konfurta Soomaaliya iyadoo aan marna la caddeyn sababta ay u dhaceen inay farsamo tahay iyo in la soo riday.
Previous articleXOG: Safiiro dowladda Soomaaliya magacawday oo ku dhowaad laba bilood ku xayiran Muqdisho
Next articleAfduub fashilmay oo ka dhacay iyo rasaas la isku weydaarsaday Cadaado